YEYINTNGE(CANADA): Friday, November 04
ဒိုင်ဗင်ကျွန်းမှ Fight Star ဂီတပွဲတော်(၂) (Zသိမ်း)
by ဖိုး သိကြား on Friday, November 4, 2011 at 8:39am
ဇော်မင်းဖွတ် ကိုယ်တိုင်ရေးထားပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားသည့် သီချင်းတပုဒ်က "ပြောင်းပြန်စီးသော..မြစ်တစင်း"
သီချင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာမှာ ဧရာဝတီမြစ်ကို မြောက်မှတောင်သို့ မစီးဆင်းစေပဲ တောင်မှမြောက်သို့ စီး
ဆင်းစေလျှင် မည်သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်လျှင် တရုတ်တို့ထံအရောက် မြစ်ဖောက် ပေးလိုကြောင်း
မြန်မာပြည်မှ ထိန်ထိန်ညီးနေတဲ့ မီးတွေဖြင့် တရုတ်တို့ကို ပံ့ပိုးပေးလိုကြောင်း ရူးကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်များကို ရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်တပုဒ်ကတော့ ဒေါ်လာများရဲ့ သတို့သမီး ဖြစ်ပါတယ်..။
"အားလုံးပဲ အဆင်ပြေရင် အီးပေါက်သံလေးတွေ ကြားချင်ပါတယ်.."
VIP အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ တရုတ်ဧည့်သည်များကတော့ နှစ်သက်လို့ အီးများ အပြိုင်အဆိုင်ပေါက်ကြလေ၏ တီဗွီမှ ကြည့်ရှု့
နေကြသည့် ပရိတ်သတ်များမှာတော့ ဒေါသတွေ တချောင်းချောင်း နှာခေါင်းတရှုံ့ရှုံ့..ဇော်မင်းဖွတ်မှာ ရာဇ၀င်များရဲ့
သတို့သမီးကို ခံစားချက်ပါပါနှင့် ဆိုနေပြန်ပေသည်..။
♪ ♥ ♫ ♥ ♪ကွယ်လွန်ပြီးသောအိပ်မက်များ..ဒီတခါနိုးထ အသစ်ဖြစ်လာ..♪ ♥ ♫ ♥ ♪
♪ ♥ ♫ ♥ ♪အိမ်တွေကားများရဖို့ ဒေါ်လာငွေတို့အတွက်ဖြစ်စေ..♪ ♥ ♫ ♥ ♪
♪ ♥ ♫ ♥ ♪ဖြတ်သန်းရင်းနဲ့စီးဆင်း.. သူဟာဒေါ်လာများရဲ့♪ ♥ ♫ ♥ ♪
♪ ♥ ♫ ♥ ♪လျှို့ဝှက်ချက်တို့သိမ်းဆည်းထား..ဧရာဝတီ♪ ♥ ♫ ♥ ♪
♪ ♥ ♫ ♥ ♪ဒေါ်လာများရဲ့ သတို့သမီး.. ငါတို့ရဲ့ ရောင်းကုန်..ဧရာဝတီ♪ ♥ ♫ ♥ ♪
သို့ကလို Fight Star အဖွဲ့ဝင် ဇော်မင်းဖွတ်(လျှပ်စစ်) မှ အားပါးတရ ဖြေဖျော်သွားလေသည်.။
ဤသို့ဖြင့်စတိတ်ရှိုး အစီအစဉ်ပြီးနောက် Fight Star အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပြဇာတ်မင်းသား သောနုတ္တိုရ်ကျော်ဆန်းရဲ့
"မုဆိုးကျတဲ့ မျက်ရည်စ"ဇာတ်လမ်းကိုကပြပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမှာ ဆန္ဒန်ဆင်မင်းဇာတ် ဖြစ်သော်လည်း ယခုဇာတ်
မှာ ဆန္ဒန်ဆင်မင်းက ဇာတ်လိုက် မဟုတ်ဘဲ မုဆိုးညစ်ထွေးငမိုက်ခွေး..မုဆိုးပေတလူ အခေါက်ထူ ဖြစ်တဲ့ သော
နုတ္တိုရ်မုဆိုးက ဇာတ်လိုက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားသည်.။ ကောင်းလေစွ(စိတ်ညစ်ဖို့)
ဇာတ်လမ်းအမှန်မှာ လက်ဆောင် ပဏ္ဏာလိုချင်၍ ဆင်စွယ်လာယူခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ယခုဇာတ်လမ်းတွင် မိဖုရား
ကြီးနှင့် ဘုရင်ကြီးတို့၏ သောကကို မကြည့်ရက်၍ သေလိုကသေစေတော့ ဟူသော သဘောဖြင့် တောထဲသို့လာရပုံ
ဆန္ဒဆင်မင်းနှင့် တွေ့ချိန်မှာလည်းဆန္ဒဆင်မင်းကို မသတ်လိုကြောင်း အလွန်တရာ ချစ်မြတ်နိုး သနားမိပါကြောင်း
အဆိုကောင်း အငိုကောင်း ပြဇာတ်မင်းသားပီပီ မျက်ရည် ဘူးသီးလုံးလောက်ကျပြပြီး ကျနော်လည်း အကြီးကြီးကို
ချစ်ပါတယ်ဗျာ. ချစ်ပါတယ်ဗျာနဲ့. ဘာကို ချစ်မှန်းမသိ. ရာဇာနေ၀င်းစတိုင်နဲ့ စင်ပေါ်မှာဂနာမငြိမ် ရှုပ်ရှက်တွေခက်
မိုက်ကြိုးကို ခလုတ်တိုက် လဲလိုလဲ အောက်မှ VIP အဖွဲ့သားများမှာလည်း မျက်လည်လည်ရွဲနှင့် ကျနော်တို့လည်း
ချစ်ပါတယ်.. လို့ဂယောင်ဂတမ်းဖြင့် လိုက်ရွတ်လိုရွတ်နှင့် အလွမ်းဇာတ်တွေ ခင်းနေချိန်မှာ တီဗွီကြည့် ပရိတ်သတ်
တွေကတော့ တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ဟာသဇာတ်ကြည့်နေရသလို.. ဤသို့ဖြင့် VIP အကယ်ဒမီဆုရှင် သောနုတ္တိုရ်
ကျော်ဆန်း တယောက် ကပေါက်တိကပေါက်ချာနှင့် ကပြသွားလေ၏။
ကျနော်တို့ Fight star အဖွဲ့ကြီးခုလို ရပ်တည်လာတာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ပို့သတဲ့မေတ္တာတွေကြာင့် မဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ..အဲဒီမေတ္တာတွေနဲ့သာ အုတ်စီလို့ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒီထက်မက ချမ်းသာပြီပေါ့ဗျာ..ကျနော်
တို့ကိုခုလိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ဖွတ်သဘင်အဖွဲ့ကြီးက ဇာတ်ဆရာကြီး ဆရာ ရွှေဝဒတ်
ကိုလည်းဒီနေရာက ကန်တော့လိုက်ရပါတယ်ဗျာ. ငှီး..အီး..အီး ဟုဆိုကာ မျက်ရည်များ တတောက်တောက်နဲ့ ငိုချ
ကျန်လူများလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ကာ ပိတ်ကားကိုချရန် အချက်ပေးလိုက်ရ၏။ ပိတ်ကားနောက်ကွယ်မှာ
ဟေ့လူ..ဘာလို့ငိုတာလဲဗျ.. ခင်ဗျားကလည်း.. ကျုပ်တို့ ဆရာကြီးက ရှောမှ မရှောသေးတာ.. ဟိုမှာပရိတ်သတ်
တွေ ကြည့်နေတယ်.. မရှက်ဖူးလား..
အရင်ကတော့ ကျုပ်မှာ အရှက်ရှိပါတယ်ဗျာ. ဒါပေမယ့် သဘင်သည်မရှက်ရ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖွတ်ရွှေမဟာသဘင်
ရောက်ပြီးတဲ့နာက်ပိုင်း အရှက်မဲ့လာတယ်ဗျာ.. အလုပ်က သင်ပေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ခုငိုတယ်ဆိုတာလည်း
ဟိုသတင်းကို သတိရပြီး ကျုပ်တို့ ဆရာကြီးလည်း ခုလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေး တွေးမိပြီး ၀မ်းနည်းလို့ ငိုမိတာပါဗျာ..
ကဒါဖီသတင်း.လေ..ဟုဆိုကာ.. မျက်ရည်များ ကျလာပြန်သည်။။
သို့ဖြင့်. အတန်ကြာမှ ဂီတပွဲအား ပြန်စနိုင်လေသည်။
ကိုအပုလေးရေ့.. ခင်ဗျားက Fight Star ခေါင်းဆောင် ပြဇာတ်မင်းသားဆိုတော့ ပညာစုံတတ်မှာပေါ့..
ဒါပေါ့ဗျ.. ပညာတတ်တာကတော့ ကျုပ်တို့က မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ဗျ
ဂျပန်ခေတ်က နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သောက်တလွဲအေးမောင်ဆိုတာ ကျုပ်အဖေဗျ
ဟင်..ခင်ဗျားဟာ ထန်းတက်လက်မှတ်ရတဲ့ သောက်တလွဲအေးမောင် သားကိုးဗျ..
ဒါပေါ့.. သိတယ်မဟုတ်လား ကျုပ်တို့မျိုးရိုးက အလုပ်လုပ်ရင် သူများအထက်ကပဲလုပ်တာ..ကျုပ်အဖိုးအလုပ်
အင်း.ဟုတ်ပေသားဗျ.. ဒီလိုဆို ခင်ဗျားကို ပညာစမ်းမယ်..။
ကြိုက်တဲ့ဘက်ကစမ်း.. ဘယ်ဘက်ကစမ်းစမ်း..ညာဘက်ကစမ်းစမ်း.. ချိုင်းမွှေးကြီးပဲ
ဇော်မင်းဖွတ်မှ အပုလေးအား နရင်းတီးလိုက်လေ၏..ခွပ်
ကဲဒါဆိုရင် ကျုပ်က ၁ကနေ၁၀ အထိ မေးမယ်..ခင်ဗျားက ဖြေ
တစ်.. တစ်ကောင်တည်း ဒါပေမယ့်ဖွတ်
သုံး..သုံးမရတဲ့ အတွေးအခေါ် တွေက ခေါင်းထဲမှာအပြည့်..ငှဲ.ငှဲ..
လေး.. လေးလေးနက်နက် ကတ္တရာပုံးထမ်းပြီးပြောနေတာနော်
ငါး..ငါးပုတင်းဟင်းစားတာများလို့ ငါပုပြီး တင်းတာ ဘာဖြစ်လဲကွ
ကိုး.ကိုးပါးသီလအသာထား ငါးပါးသီလတောင် မမြဲချင်ဘူး..ဟီး..ဟီး
ထို့နောက် ငပုတင်းကျော်ဆန်းမှ ကိုဇ်ာမင်းဖွတ်အား
ဒါနဲ့ပြောရဦးမယ်ဗျ.. ခုတလော အပြင်မှာ ခင်ဗျားလည်းနာမည်ကြီးနေတယ်နော်
လုပ်ပါဦး..ဘယ်လိုနာမည်ကြီးတာလဲ?ခင်ဗျားက မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ပြန်ကိုက်မယ်ဆိုတော့ သိမှာပေါ့
အပုလေးမှ ကိုဇော်မင်းဖွတ်အား နရင်းပြန်တီးလိုက်၏။
ကျုပ်လည်း တခြားမီဒီယာတွေကိုတော့ ပြန်ကိုက်..ပြန်တိုက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် ဖေ့ဘွတ်ဆိုတဲ့ ကောင်
ကိုတော့ ကျုပ်ပြန်မတိုက်နိုင်ဘူးဗျာ..ဒီကောင်က ကျုပ်တို့ VIPဖွတ်တွေကို အရမ်းတိုက်ခိုက်တာဗျ..။ ကျုပ်ကောင်လေးတွေကိုတော့ ပြန်ကိုက်ခိုင်းထားပါတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မလွယ်ဘူးဗျ..။
ခုတောင် ကျုပ်တို့ Fight Star ဂီတပွဲတော်ကို ဘယ်လို ဆော်ဦးမလဲ မသိဘူး..ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကနေရတာ
ဟုတ်ပါ့နော်..ခုန ကျုပ်ရဲ့သတင်းတွေဆိုတာ ပြောပါဦး..
ဒီလိုလေ..ခင်ဗျားက မီးတွေ ရောင်းစားနေတယ်တဲ့..ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ သတင်းစာတွေလည်း အကုန်
သတင်းစာထဲက သတင်းတွေမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတွေ များလို့ လျှော့ဖြစ်ပြီး လောင်ကုန်တာဆိုပဲ
နောက်တခုက သူတို့က ပြောနေတယ်.. သူများတိုင်းပြည်မှာ မီးကြိုး က ၃ကြိုးတဲ့.။ အပူကြိုး(Phase)၊ အအေးကြိုး(Neutral) မြေစိုက်(Earth)ကြိုးဆိုးပြီး ၃ချောင်းသုံးတယ်တဲ့ ဒီမှာ ဘာလို့ ၂ချောင်းပဲ သုံးတာလဲတဲ့
ကျုပ်ရှင်းပြမယ်.. ဒီကမီးကြိုး ၃ချောင်းမှာ တချောင်းက အပူးကြိုးအတွက် တချောင်းက အအေးကြိုးအတွက်
သြော်..သဘောပေါက်ပါပြီဗျာ..နောက်တခုက ခင်ဗျားပြောတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်တွေပိုလျှံလို့ ရောင်းတယ်ဆိုတာလည်း
ပြည်သူတွေက မကျေနပ်ဘူးဗျ..ဒီအတိုင်းဆို ဒီနှစ် VIP အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာ ခင်ဗျားပဲ ရမယ်ထင်တယ်။
ဟာ.. လျှပ်စစ်တွေကိုလည်း တကယ်ပိုလို့ရောင်း..ရောင်း..ဟာ..
ထိုထို မီးရောင်းစားသော လူကြီးစကားပင်မဆုံးချေ.. လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်သွားသဖြင့် ဇာတ်ရုံတခုလုံး
တီဗွီမှ ကြည့်နေကြသည့် ပရိတ်သတ်များမှာလည်း နှစ်ထောင်းအားရစွာ လက်ခုပ်သြဘာများ ပေးလိုက်ကြလေ
ယုံကြည်ချက်အတွက် အကျဉ်းကျနေရသူများအား ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးပါ..။
တိုင်းရင်းသား သွေးချင်းများအပေါ် ဆင်နွဲနေသော စစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံး ရပ်တန့်ပေးပါ..။
အားလုံးကို ချစ်ခင်လေးစားသော.. ဖိုးသိကြား (04/11/2011)
ဒိုင်ဗင်ကျွန်းမှ Fight Star ဂီတပွဲတော်(၁)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/04/20110အကြံပြုခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်မြကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတောထဲမှာတွေ့တဲ့အခါသူက DABရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာဘဲ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေတဖွဲ့ခြင်းငြိမ်းချမ်းရေးယူကြလို့အင်အားချိ့နဲ့သွားခဲ့တာကိုထောက်ပြသွားတယ်၊ အခုUNFC ဟာအရင်ကအမှားတွေကိုသင်္ခန်းစာယူပြီးဖဲ့စည်းရုံးတာမခံဘဲအဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးပွဲကိုခိုင်ခိုင် ရပ် ပြီးတောင်းဆိုနိုင်ဘို့လိုတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မြက ငြိမ်းချမ်းရေးယူတဲ့အဖွဲ့တွေကိုခေါင်းဆောင်နဲ့ငယ်သားခွဲ ပစ်လိုက်တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်သူတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ကွက်တွေပေးပြီးဖျက်စီးလိုက်တော့သာယာပြီး ငယ်သားတွေနဲ့ကွာဟသွားတယ် တဲ့ဒီစကားဟာသွေးထွက်အောင်မှန်တယ်လို့ဆိုရမယ်၊ အခုကြည့် ဗိုလ် စောချစ်သူဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလဲ၊ DKBA တွေအခုမတရားတာကိုငုံမခံဘဲပြန်ချတော့မပါတော့ဘူး မရဘူးတဲ့စည်းစိမ်ကိုမစွန့်နိုင်တော့ဘူးလေ။
ရာထူးကြီးကြီး ၂ခုယူထားတဲ့ဟန်ညောင်ဝေဟာအခုရန်သူနယ်မြေမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းရှမ်းပြည် အထိသွားပြီးလည်ပတ်နေပြီ၊ စဉ်းစားကြပါ၊ EBO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ DVB ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး(ပူပူနွေးနွေးဖြစ်ခါစ) အနေနဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးအတွက်အောက်ခြေမဟုတ်ဘဲ ထိပ် ဆုံးကနေရာယူထားသူကဘာသဘောတူညီချက်မှပေးစရာမလိုဘဲ ပြန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါ့မ လား၊ UNFC အနေနဲ့အထူးသတိထားဘို့လိုပြီ၊ ENC လည်းသတိရှိဘို့လိုပြီ၊ တပ်ပေါင်းစုမူအတိုင်းသွား နိုင်ဘို့လိုသည်။
~အင်းစိန်မြို့နယ် ကွက်သစ်ရပ်ကွက်မှ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ် မတရားအသိမ်းခံရသည့် ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြားစာ~
"အင်းစိန်မြို့နယ် ပေါက်တောဝ မှတ်တိုင်အနီး ကွက်သစ်ရပ်ကွက်မှ နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ် မတရားအသိမ်းခံရ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေကြသော အိမ်ထောင်စု(၁၀)စုခန့်မှ မိဘ၊ သားသမီး၊ ကလေး၊ လူကြီး (၅၀)ကျော်မှ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တိုင်ကြားစာ"
By Ko Myoe(Face book)
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဇာတ်သိမ်းစေတဲ့ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်အမျိုးသမီး ( မောင်မောင်ဝမ်း )
04 Nov 2011 Yeyintnge's Diary
Published on November 4, 2011 by တိုင်းကျော်
သောကြာ, 04 နိုဝင်ဘာ 2011
မုတ်သုံရာသီဖြစ်တဲ့ ဇွန်လနဲ့ အောက်တိုဘာလအတွင်းရွာတဲ့ မိုးရေချိန်ကိုလိုက်ပြီး ရေကြီးတာဟာ အရှေ့ တောင်အာရှဒေသမှာ နှစ်စဉ်ဖြစ်နေကြ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်တော့ ဘန်ကောက်မြို့ တော်ရေလျှံမှုနဲ့ မကွေးတိုင်းရေကြီးမှုမှာ ဒေသခံတွေရာနဲ့ချီ သေဆုံးကြပြီး လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ ပျက်စီးတဲ့အတွက် ကမ္ဘာကအာရုံစိုက်တဲ့သတင်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလည်း ရေကြီးလို့ လူနှစ်ရာကျော်သေဆုံးကြောင်း သိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလမှာ ရက်ဆက်မိုးသည်းထန်တဲ့အတွက် မကြုံစဘူးချောင်းရေလျှံလာလို့ မကွေးတိုင်း ပခုက္ကူ၊ မြိုင်၊ ပေါက် နဲ့ ဆိပ်ဖြူမြို့ နယ်တွေမှာ လူ (၁၀၆) ဦးသေဆုံးပြီး အိမ်ခြေ (၂၀၂၃) လုံး၊ တိရစ္ဆာန်မျိုးစုံ (၂၄၀၀) ကျော်နဲ့ သီးနှံစိုက်ခင်းဧက (၃၀၀၀) ကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ အတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားသတင်းဌာနတွေကတော့ နှစ်ရာကျော်သေဆုံးဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေ ခန့်မှန်းတာကို ဖော်ပြပါတယ်။ ရေဘေးဒုက္ခဖြစ်တဲ့နေရာကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး အကူအညီပေးတဲ့သတင်းနဲ့ အစိုးရစစ်တပ်က အကူအညီပေးတဲ့ သတင်းတွေကို အစိုးရသတင်းဒီမီယာတွေမှာ အဓိကဖော်ပြထားပါတယ်။
တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ ဇူလိုင်လကစပြီး ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းမှာ မိုးသည်းထန်တဲ့အတွက် ဟင်္သာတမြို့ မှာ ရေကြီးပေမယ့် အသေအပျောက်မရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီးမြို့ နယ် ဥက္ကံမှာ သြဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့က ရေကြီးတော့ လူအသေအပျောက်ရှိပါတယ်။ ပဲခူးမြို့ မှာ နေရာအတော်များများ ရေလျှံလို့ လှေကိုသုံးရပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖြစ်လေ့ရှိပေမယ့် ဒီနှစ်ဟာ အဆိုးဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ ဧရာဝတီရေလျှံလို့ မန္တလေးမြို့ ရပ်ကွက်အချို့  ရက်အတော်ကြာ ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့ ကြရပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ တမူး၊ ကလေးနဲ့ ကလေးဝ စတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ရေလျှံကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ မြစ်ရေလျှံမှု၊ မိုးသည်းထန်မှုကြောင့် ရေဘေးဒုက္ခရောက်ကြတာဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် နှစ်စဉ်အတွေ့အကြုံလို ဖြစ်နေပါတယ်။
မိုးသည်းထန်ပြီး မြစ်ချောင်းတွေရေလျှံလို့ ရေဘေးဒုက္ခရောက်ရတာဟာ သဘာဝအန္တရာယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေလျှံတဲ့ဆည်ကို ဖောက်ချတဲ့အတွက် ရုတ်တရက်ရေလျှံပြီး ဒုက္ခရောက်ရတာဟာ လူလုပ်တဲ့ ရေကြီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပခုက္ကူ၊ မြိုင်၊ ပေါက်၊ ဆိပ်ဖြူ စတဲ့ မြို့ နယ်တွေမှာ တောင်ကျရေကြောင့် ချောင်းရေအလုံးအရင်း ကျဆင်းလာတဲ့အတွက် ရေဘေးကြုံတွေ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥက္ကံ၊ ယင်းမာပင် နဲ့ ကျောက်ဆည်မှာ ရေဘေးဒုက္ခရောက်ရတာဟာ ဆည်တွေကို ဖောက်ချလိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကံမှာ မိုးသည်းထန်လို့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကျော်လာတဲ့ တဘူးလှဆည် ကို ဆည်မြောင်းဌာနက ဖောက်ချတဲ့အတွက် အနီးက ကျေးရွာတွေကို ရေလွှမ်းမိုးပြီး သေကျေပျက်စီးမှုရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျောက်ဆည်မှာတော့ မြစ်ရေလျှံတဲ့ဒဏ်ကိုရော ဆည်ဖောက်ချတဲ့ဒဏ်ကိုရော ခံကြရပါတယ်။ ဆည်ဖောက်ချလို့ ဒုက္ခရောက်ရုံတင်မကပဲ သေဆုံးသူပါရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းမာပင်မြို့ နယ်မှာ ယမားဆည်ကို ဆည်မြောင်းဌာနက ဖောက်ချမှုကြောင့် အသေအပျောက်နဲ့ အပျက်အစီးတွေ ရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း စလင်းမြို့ နယ်မှာ ရေကြီးလာလို့ ဆည်ကိုဖောက်ချလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးရွာ (၂၀) လောက် ရေလွှမ်းမိုးတဲ့ဒဏ်ကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ၂၀၀၆ အောက်တိုဘာလက မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်၊ မြစ်သာ၊ မြစ်ငယ် နဲ့ ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ်တွေမှာ ဆည်တွေရေလျှံကုန်တဲ့အတွက် အသေအပျောက်ရှိတာကို အစိုးရသတင်း မီဒီယာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆည်ရေ လွှမ်းနိုင်တဲ့နေရာက ပြည်သူလူထုကို ဆည်ဖောက်မယ့်အကြောင်း ကြိုတင်သတိမပေးတာဟာ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနရဲ့  ဓလေ့ထုံးစံလို ဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အများအပြားဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဆည်တွေ၊ ရေကာတာတွေဟာ ပြည်သူလူထုကို အချိန်မရွေး အန္တရာယ်ပေးနိုင်တာကို သတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်း မိုးသည်ထန်လို့ ဆည်ရေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ် ရောက်လာရင်ရေကို ဖောက်ချရပါတယ်။ ဒီလို ဖောက်မချလို့ ဆည်ကျိုးရင် ပိုပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တာကြောင့် ဖောက်ချရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆည်ဖောက်မယ့်အကြောင်း ရေလွှမ်းမယ်နေရာတွေကို ကြိုတင်အသိပေးရပါတယ်။ ကြိုတင်အသိပေးထားတဲ့အတွက် အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး အပျက်အစီးသက်သာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြစ်ရေတက်လာလို့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကျော်လာရင် မြစ်ကမ်းပါးဒေသကို ရေလွှမ်းနိုင်ကြောင်း တရက်နှစ်ရက်လောက် ကြိုပြီး သတိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရုတ်တရက် မိုးသည်းထန်လာတဲ့အတွက် တောင်ကျရေအပြင်းအထန် စီးဆင်းလာတာကို ကြိုတင်သတိပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မြစ်ငယ်ချောင်းငယ်တွေမှာ တရှိန်ထိုးရေတက်လာပြီး တရှိန်ထိုး ရေကျသွားတာကို ‘လျှပ်တပြက် ရေကြီးမှု’ လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒဌာနက ဆိုပါတယ်။ မြစ်ဖျားချောင်းဖျား ရေဝေကုန်းတန်းမှာ မိုးသည်းထန်လာရင် လျှပ်တပြက်ရေကြီးလာနိုင်တာကို ကြိုတင်သတိပေးနိုင်ဖို့ ခက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆည်ရေလျှံလာလို့ ဖောက်ချတာဟာလည်း လျှပ်တပြက် ရေကြီးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူကလုပ်တဲ့ လျှပ်တပြက် ရေကြီးမှု ဖြစ်တာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေက ကြိုတင်အသိပေးနိုင်ရင် ဒေသခံတွေ အသက်ချမ်းသာနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မိသားစုနဲ့နီးအောင် ရွှေ့ပေးနေ
မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာ မရှိပါဘူးလို့ ပြောလေ့ရှိတာကြောင့်
ဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းရဲ့ အမြင်ကိုသိရအောင် မေးကြည့်ပါသေးတယ်။
“ကနေ့ ကျနော်တို့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေတွေကို ကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေအရပဲ ကျနော်တို့ အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အဲ့ဒီထဲမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ပါကောင်းပါမှာပါပဲ။ ဒါတွေအားလုံးကိုလည်း သမ္မတကြီးက သူ့ကိုအခြေခံဥပဒေက အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ကျင့်သုံးပြီးတော့ ဒါတွေကို ဘာလုပ်ပေးနေလဲ၊ ဖြေလျှော့ပေးနေပါတယ်။”
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီ
မျိုးသန့် | သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၁ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ပြင်ဆင်မှု သုံးခုပြုလုပ်ထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ လက်မှတ်ထိုးကာ သောကြာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ဟု မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၏ ညရှစ်နာရီ သတင်းတွင် ပါရှိသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးက ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေမူကြမ်း
ကို သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပဒေသစ်တွင် “အခြေခံ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး” ဟူသည့်နေရာတွင် “ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်” စကားရပ်အစား “လေးစားလိုက်နာ” ဟုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီတခုသည် အနည်းဆုံး မဲဆန္ဒနယ် သုံးနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဆိုသော ကန့်သတ်ချက်နှင့် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေသူများ
နိုင်ငံရေး ပါတီဝင် မဖြစ်ရ ကန့်သတ်ချက်များ ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ထားသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၆၀၀ လောက်ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လွတ်ငြ်ိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့် ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ နေပြည်တော်နဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီ အသိုင်းအဝိုင်းက သတင်းရပါတယ်။
ကျွန်းပင်ရောင်းစားပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့ ဗျူဟာမှူး
သင်္ကန်းညီနောင်က စာ ၂ စောင်
Friday, November 04, 2011 Sithu Linn
မြ၀တီမြို့နယ်၊ အမှတ် (၃) အခြေကျ စစ်ဗျူဟာ သင်္ကန်းညီနောင်ရဲ့ လက်ရှိဗျူဟာမှူးဟာ စစ်ဗျူဟာဝင်းအ တွင်းက လုံးပတ် ၇ ပေကျော် သက်တမ်းရင့် ကျွန်းပင်ကြီးသုံးပင်ကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ခုတ်လှဲရောင်းချ လိုက်ပါတယ်။ ၀ယ်သူကတော့ ၀ိရှမ်းရွာ (သင်္ကန်းညီနောင်အနီး) တွင် နေထိုင်သူ လောပု (ကိုးကန်း-၀ ငြိမ်း ချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်ဟောင်း) ဆိုသူ သစ်ကုန်သည် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗျူဟာမှူးအဆက်ဆက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ကျွန်းပင်ကြီးတွေကို ခုတ်လှဲလိုက်တဲ့ အတွက် ဒေသခံလူထုများ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။
သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ(၈)၊ ပုဒ်မခွဲ(က) မှာ မည်သည့်နေရာမဆို ပေါက်ရောက်သည့် ကျွန်းပင်သည် နိုင်ငံတော် ပိုင်ဖြစ်သည်။ ခုတ်လှဲသူများအား ပုဒ်မ ၄၃ (က) အရ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် (သို့) ငွေဒဏ်ငါးသောင်းလို့ ဖော်ပြ ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ဗျူဟာမှူးဟာ သစ်ကားတင်ကား၊ ခရီးသည်ကား၊ ကုန်ကားများက ဂိတ်ကြေးကောက်ခံ သလို လိုင်စင်မဲ့ကားများလည်း ကုန်သည်များနဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှာနေသူဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေဖြင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့အညီ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပြည်သူများ ကိုယ်စား တင်ပြလိုက်ပါ တယ်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ သတင်းဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်း၊ အမှတ်(၃) စစ်ဗျူဟာမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးတင်အေးကို သက်ဆိုင်ရာက ယနေ့ထိ တစုံတရာ အရေးယူတာ မရှိလို့ ဒေသခံများ၊ ပိုပြီး ခံပြင်းစရာဖြစ်နေပါတယ်၊ သစ်ကုန်သည် လောပု (ခ) စိုးနိုင် (ကိုးကန့်-၀ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း) ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၆.၁၀.၁၁-ရက်နေ့က မြ၀တီ သစ်တောဋ္ဌာနကို လာရောက်ပြီး သစ်တောဋ္ဌာနအရာရှိများကို အရက်/အစားအသောက်တွေနဲ့ ဧည့်ခံပြီး မိမ်ိရဲ့ဥပဒေပြင်ပလုပ်ရပ်တွေကို အကာအကွယ်ယူ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
သစ်တောဋ္ဌာန ရှောင်တခင်ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးမှုတွေကို ရှောင်ရှားတိုင်း လောပု (ခ) စိုးနိုင်ဟာ ဝှေ့ရှမ်းရွာ-
ဝှေ့ရှမ်းဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်၊ မဲ့ပလဲ့ရွာ-မဲ့ပလဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ၎င်းပိုင် သစ်ခွဲစက်နှင့် သစ်ခွဲသား/သစ်လုံးများကို ဘုန်းကြီးကျောင်း အကာအကွယ်ယူပြီး ပြုလုပ်နေတာကို ကျွန်တော်တို ဒေသခံပြည်သူ လူထုကို မထေမဲ့မြင်ပြုတာ ဖြစ်တဲ့အပြင် စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ဖေါ်ဆောင်နေတဲ့ အရပ်သားအစိုးရသစ်ရဲ့၊ ဥပဒေနဲ့ အပြောနဲ့အလုပ် ညီညွတ်မရှိတာကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။
ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှုးကြီးတင်အေးဟာ ဒေသဆိုင်ရာ စစ်ဘက်အကြီးအကဲဖြစ်တာကြောင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစည်း
ကမ်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေကို စံပြအနေဖြင့် ထိမ်းသိမ်းလိုက်နာရမဲ့အပြင် အခြား ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ စည်းကမ်း-ဥပဒေများကိုလည်း လေးစား တန်ဖိုးထားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ သို့မှသာလျှင် အောက်ခြေ အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ ရှင်းလင်းမြင်သာတဲ့ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အထက်က အပြောနှင့်အောက်ခြေ အဖြစ်အပျက် လက်တွေ့အပြောနှင့် အလုပ် ညီညွတ်မှာဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
By featured, ရန်ပိုင် on November 4, 2011 11:15 am
By ဧရာဝတီ on November 4, 2011 4:34 pm
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေါက်တာဦးမြင့်တို့အား ဤသို့တွေ့ရသည် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
အင်းစိန်ထောင်မှာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကြနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို သောက်ရေ ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ပြီး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရကြောင်း၊ ဒီကိစ္စအတွက် အကျဉ်းထောင် အာဏာပိုင်တွေမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူ ၈ ဦးကို စစ်ခွေးတိုက်လို့ခေါ်တဲ့ အလုံပိတ် တိုက်ခန်းတွေမှာ အိပ်ရာတွေ ဖျာတွေ မပေးဘဲ ပိတ်လှောင် ထားတယ်လို့ ရထားတဲ့ သတင်းတွေက ဆိုပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေကို အခုလို သောက်ရေမပေးဘဲ ထားတာဟာ ကုလသမဂ္ဂက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို ဆက်ဆံရမယ့် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်သလို ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာပါတဲ့ “လူသားတိုင်း အသက်ရှင်သန်ခွင့် ရှိရမယ်” ဆိုတဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးကိုလည်း ချိုးဖောက်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံရာမှာလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြကြတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာက အာအက်ဖ်အေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ကိုကြီးနဲ့ကိုအာကာဗိုလ်တို့က သေသေချာချာ ရှင်းပြကြပါတယ်။ ဥပမာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျ ခံထားရသူတွေဟာ ဥပဒေအရ ရရမယ့် လျှော့ရက် မရတဲ့အတွက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတယ် ဆိုတာကိုပေါ့”
Amnesty International က ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ထောင်ဒဏ် ၆၃နှစ် ကျခံနေရတဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်သံဃာ အရှင်ဂမ္ဘီရဟာ အကျဉ်းထောင်တွင်း နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှု ဒဏ်ကြောင့် ဆေးရုံတင် ကုသပေးဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေ ပြောပြချက်အရ သိရကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
~အင်းစိန်မြို့နယ် ကွက်သစ်ရပ်ကွက်မှ နိုင်ငံတော်ပိုင...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရှိနေ...
ရန်ကုန်တွင်လိုအပ်နေသည့် ရေဖူလုံရေးအတွက် အဆိုကို ကန...
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ရန်ကုန် ညီလာခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...